Magic Movie sameeyey, Si fudud Samee Movies Professinal-raadinta iyo soo duubey
> Resource > Video > layaab soo noqda maalin walba Videos galay cajiib Home Movies
Maxaa a sixir gaare movie waxay ka dhigan tahay inaad? Aragtidayda, waa in aan ku siin oo kaliya oo dhan video caadi itusi aad u baahan tahay si ay u wada dhejiya sawirkaaga / video clips in ay sameeyaan filim dhamaystiran, laakiin sidoo kale si deg deg ah iyaga oo toobad keen inay filim xirfad-raadinta ama duubey in caddayn doonaa qof kasta. Tan iyo markii aad halkan u joognaa, aad u badan tahay in la raadiyo sida video gaare ah sixir. In this article, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, aad layaab u noqon kartaa maalin kasta videos galay filimada guriga cajiib ah, fiican ee la wadaago. Oo dadkii oo dhammu waa tallaabooyin degdeg ah oo sahlan. Hel hoos ku maxkamad lacag la'aan ah hadda.
Ka dib markii aad ka soo dejisan this gaare movie sixir, si fudud raac tallaabooyinka hoos ku sahlan tahay in la turxaan-aad videos si fudud. Tilmaan-bixiyahan waxa soo qaataa Screenshot Windows, laakiin version Mac dhow ka shaqeeya isku mid.
The gaare warbaahinta sixir bixisaa User ah ee Album aad u maamuli lahayd ilaha files, oo ay u sii dhawrsan u helaan haboon. Si aad u dajiyaan aad videos, audio ama images in barnaamijkan, guji "Import" xitaa folder file ama iyaga si toos ah u jiidin uu furmo suuqa hoose.
Dhammaan files keeno tusi doonaa sida thumbnails in ay leeg- bidix. Markii ay soo galeen meel, jiididda iyo hoos u files kuwaas oo ay Timeline u dhiganta.
2 Samee aad masterpiece gaar ah qalab ku anfacaya
Hadda, ka hor tagaan in ay wax ka bedel iyo shakhsiyeeyo aad videos. Iyada oo tafatir Jadwalka ku salaysan raaxo leh oo dhamaystiran feature jiitaa-n-dhibic, waxaad ka heli doontaa in ay u fududahay badan abid si aad u bilowdo adduunka ee video tafatirka. Waxaa ugu muhiimsan: codsigan qoreysa wax walba oo aad u baahan tahay.
Basic Edit: Double guji video clip ah oo ku saabsan Timeline in ay arbushin ilaa guddi tafatir ah. Halkan, waxaad isku shaandheyn karaa, dalagga, qabsato dhalaalka, bedelkeeda, saturation in ay leeg- video ah, ama isbeddel mug, garoonka, ka baxeysa dhigay / libdhi baxay saamayn ku Murayaad maqal. Marka taa laga reebo, aad samayn karto goynta, koobiyeynta, qaybsama, ay ka saareen audio, iwm by a menu click midig.
Ku dar Qaybaha: darista xubno sida kala guurka siman iyo sida diirada muuqaal ah midabo ka jafi doonaan video goobtii. Markaasaa waxaa taas wada sixir video editor ku samayn kartaa fudud jiitaa-n-dhibic. Guji "Text", "Saamaynta", "PIP", "guurka", "Intro / Credit", ama "Sound" tab kor ku xusan Jadwalka ah, aad arki doonaa boqolaal foom oo lacag la'aan ah heli karaa inay taabtaan ilaa aad videos. Just soo qaado mid aad jeceshahay iyo kuwaa oo in jagada si aad u dalbato. Marka ay timaado oo meel, aad xitaa qabsato karaa muddada cayaarta oo dhigay animation si ay u gaaraan in ka badan.
Advanced Edit: tafatirka ayaa sare for this editor movie Magic waxaa loola jeedaa in qalabka tafatirka video xirfadeed oo kale ah usii-wareeg , humaag , cut boodi , fool-off , iyo flash-n-qabsaday dhigaya video aan caadi ahayn. Si tan loo sameeyo, kaliya riix "Power Tools" icon kor ku Timeline, oo waxaad soo daaqaddii ka caawinaya inaad buuxisaa oo dhan saamayn ku xusan in click ah.
3 Save iyo wadaagaan abuurkiinna
Marka aad ku qanacsanayn natiijada uu furmo suuqa previewing, si fudud ku dhacay "Abuur" si loo badbaadiyo abuurkiinna. Waxaad tusi kartaa off aad video goobaha video qaybsiga caanka ah sida YouTube, Facebook, Twitter, ama badbaadin dhammaan qaabab loo jecel yahay inuu u ciyaaro on go ah. Marka laga reebo in, sidoo kale waxa aad ku gubi karaa in DVD leh tayo wanaagsan leh si ay u soo daawadaan TV-ga.
Hambalyo! Waxaad kaliya sameeyey video cajiib ah diyaar u ah inay la wadaagto. Waa quruxsan fudud, si degdeg ah, qabow si ay u abuuraan movie guri arrintan gaare movie sixir, sax? Download maxkamadda lacag la'aan ah oo hadda bilaabay!
Top 10 Adobe jilitaankii plugins u Raadka kala duwan oo guur
Sida loo qabsaday Flash Videos ka websites